စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သည့် Self Relaxation - MiteLar
စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သည့် Self Relaxation
Self Relaxation ဆိုတာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် ကြောက်စိတ်များလာတဲ့အခါမှာ မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ကို သေချာအနားယူပေးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ အခုလို အခြေအနေမှာ အနားယူခြင်းဟာ တာဝန်မဲ့ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ အပြစ်ရှ်ိခြင်းကို ခံစားစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် စဉ်းစားနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ရန်ဖို့အတွက် အနားယူခြင်းဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အနားယူသည့်အခါမှာ စိတ်ရော ခန္ဒာကိုယ်ရော အနားယူတာဖြစ်သည့်အတွက် သေသေချာချာ နားပါ။ အနားယူခြင်းက ယခုဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ အမှန်တရားကို ရှောင်ဖို့ အာရုံလွှဲဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အားပြန်ဖြည့်တာပါ။
အနားယူချိန်ကို အမြော်အမြင်ရှိရှိ ကိုယ့်ကောင်းကျိုးအတွက်အသုံးချကြရအောင်!
1. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနားပေးပါ
Self relaxation လုပ်ဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့နော်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်ဖတ်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ game ဆော့တာ၊ ရုပ်ရှင် တွေ ပြန်ကြည့်တာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ ကိုယ်နဲ့ဝါသနာတူတဲ့ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆွေးနွေးပါ၊ တတ်နိုင်သလောက် relax လုပ်ပေးပါ။
တစ်နေ့ကို 10-15 mins လောက်လေးပဲ ဝင်လေထွက်လေ မှတ်ပြီး စိတ်ကို လျှော့ချ အနားပေးပါ။ စိတ်လည်း တည်ငြိမ်စေတဲ့ အပြင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်း ခေါင်းအေးအေးနဲ့ချနိုင်မှာပါ။
3. အစား ပုံမှန်စားပါ…အိပ်ရေးဝအောင် ကြိုးစား အိပ်ပေးပါ
အိပ်ရေးဝဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကြိုးစားပြီး အနည်းဆုံး အိပ်ချိန် ၆ နာရီရအောင် အိပ်ပေးပါ။ ရေကိုလည်း ပုံမှန်သောက်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ Coffee lovers တွေဆို coffee ကို ညနေပိုင်းသောက်တာမျိုးလည်း ရှောင်ပါ။
တစ်ချို့က ဖြစ်ပျက်သမျှ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး အကုန်ပြောပြတတ်ကြပါတယ်…တစ်ချိုကျတော့ ရင်ထဲမှာပဲထားတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ခံစားနေရသမျှကို တစ်ယောက်ထဲ ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရင် ပိုစိတ်ပင်ပန်းပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့ ချစ်သူ/သူငယ်ချင်း/မိသားစုကြား အချင်းချင်း တိုင်ပင်ပါ…ရင်ဖွင့်ပါ…နားလည်မှုပေးပါ။